Zaka tsara: misy ny azo atomboka izao… | NewsMada
Zaka tsara: misy ny azo atomboka izao…
Fakana lesona ny lesoka teo aloha. Anisan’ny nahavoa ny fitondrana teo ny tsy fisian’ny asa mivaingana miantraika mivantana amin’ny fiainam-bahoaka… mba misy fihatsarana. Tsy mahagaga raha tsy nahazo vato 10% akory tamin’ny fifidianana farany teo.
Tsy lavina, tsy nitsaha-nandoka tena ho tsy nisy nahavita ny vitany tao anatin’ny 58 taona ny fitondrana tamin’izany, nefa … Inona ny eo? Nihanahantra hatrany ny vahoaka, nanjaka ny kolikoly, nahazo vahana ny fivarotan-tanindrazana, nisy ny tsimatimanota…
Niasa tokoa, angamba, ny mpitondra, na nihevi-tena sy nitonon-tena ho izany. Saingy mety ny vahiny no nisitraka ny tombontsoa tamin’izany, na izay akaiky azy. Naman’ny miasa jamba rafozana ihany izany? Na mandeha an-jambany tsy araka ny hetahetam-bahoaka…
Mila miainga amin’ny vahoaka ny hoe fampandrosoana, iarahana amin’ny vahoaka, atao ho an’ny vahoaka…